Nitsoaka avy hatrany izy roalahy rehefa nahita ny polisy ka raikitra ny fanenjehana azy ireo. Voasambotra ny iray ka io no nanondro ny toeram-ponenan’ilay namany saingy tsy hita ity farany. Nitohy ny fitadiavana azy ka 30 minitra taty aoriana vao tratra teny Anjanahary ihany ny lehilahy. Nisy moa ny fitarainana avy amin’ny mponina sy ny fokontany mahakasika ny asa fanendahana sy halatra maro karazany eny an-toerana ka nahatonga ny Polisy hanamafy hatrany ny fisafoana amin’iny faritra iny. Natolotra ny fitsarana omaly izy roalahy ary efa naiditra am-ponja vonjimaika.